Hagaajinta Dhibaatooyinka Qabashada Panasonic Cameras
Sawirada Dijital ah Fariin qalad ah
Fariimaha Xaqiiqada Sawirka Panasonic
Baro in lagu xalliyo Panasonic Point iyo Sawirada Qarxinta
Dhibaatooyinka caadi ahaan waxay aad u yaryihiin kamaradaha dijital ah ee Panasonic Lumix. Waxay yihiin qalab aad u kalsoon ee qalabka.
Dhacdooyinkaas oo aad ka heleyso arrin, waxaad ku heli kartaa farriin khalad ah shaashadda ama kamaraduhu waxay joojin kartaa inay shaqayso sababo aan la garan karin. Inkasta oo ay noqon karto waxoogaa xiiso leh si loo arko fariin qalad ah shaashadda kamaradada, ugu yaraan fariin qalad ah ayaa ku siinaysa faahfaahin ku saabsan dhibaatada iman karta, halka shaashadda bannaan ay ku siinayso wax khayaali ah.
Toddoba buug ee liiska ku qoran waa inay kaa caawiyaan inaad xalliso farriimaha qaladka ee Panasonic .
Faahfaahin la xiriirta qaladka khaladka ah
Haddii aad aragto farriintan qaladka ah ee kamarad Panasonic, meesha xasuusta gudaha ee kamaraduhu waa mid buuxa ama jaban. Isku day inaad sawir ka qaadato xasuusta gudaha. Haddii farriinta qaladku sii socoto, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad qaabeyso meesha xasuusta gudaha.
Farriin Khadad La'aanta / Farriin Khalad ah
Labada ka mid ah farriintan qaladka ah waxay ku xidhan tahay kaadhka xusuusta, halkii kamarad Panasonic. Haddii aad haysato kaadhka xusuusta SD , ka hubi qoraalka keydka ku yaal dhinaca dhinaca kaarka. Geli fur-furka si aad u furto kaarka. Haddii farriinta qaladku sii socoto, waxaa suurtagal ah in kaadhka xusuusta la jabiyo oo loo baahan yahay in la qaabeeyo. Waxa kale oo suurtagal ah in kaadhka xusuusta loo qaabeeyey iyada oo la adeegsanayo qalab kale oo aan la socon nidaamka qaab dhismeedka faylka Panasonic. Kaadhka kaarkaaga Panasonic-kaaga si aad u hagaajisid dhibaatada ... laakiin maskaxda ku hay in qaabeynta kaadhka uu ka tirtiri doono sawirada ku kaydsan.
Maya Xulo dheeraad ah ma noqon karaan fariin qalad ah
Haddii kamarad Panasonic kuu ogolaato inaad "ku kaydsato" sawiradaada "jecel", waxaad ka heli kartaa farriintan qaladka ah sababtoo ah kamaradu waxay leedahay tiro kooban oo sawiro ah oo lagu calaamadeeyn karo sida ugu cadcad, badanaa 999 sawir. Kuma calaamadeyn kartid sawir aad jeceshahay ilaa aad ka saartid calaamada ugu jecel hal sawir ama ka badan. Fariin qalad ah ayaa sidoo kale dhici karta haddii aad isku dayeyso inaad tirtirto in ka badan 999 sawir hal mar.
Ma jiro fariin khalad ah sawir qaldan
Farriinta qaladkan waxay caadi ahaan sheegeysaa dhibaatada kaadhka xusuusta. Inta badan, waxaad ka heli doontaa fariin qalad ah marka aad isku daydo inaad ka ciyaarto sawirrada kaararka xusuusta iyo kaadhka xusuusta waa la jabiyay, madhan, jajaban, ama lagu sameeyay sawir kale. Si aad u hagaajisid kaadhka xusuusta, waa inaad qaabeysaa, laakiin qaabeynta kaararka xusuusta waxay keenaysaa dhammaan sawirada lagu kaydiyo si loo lumiyo. Isku day inaad geliso kaadhka xusuusta qalab kale ama kombuyuutarkaaga iskuna day inaad soo dejiso wixii sawiro ah oo ku keydsan ka hor inta aan la dhigin kamarad Panasonic.
Fadlan Shidaal Ka Jooji Ka dibna Kadibna fariin qalad ah
Ugu yaraan fariin qalad ah ayaa leh "fadlan." Farriinta qaladkan waxay u badan tahay inuu dhaco marka mid ka mid ah qaybaha kamaradiisu tahay mid qaldan, caadi ahaan guryaha lenska ah . Si aad isku daydo inaad u xaliso dhibaatadan, bilaw inaad garaacdid kamarad dhowr ilbiriqsi ka hor intaadan dib u soo celin. Haddii tani aysan xalin dhibaatada, isku day in aad dib u dhigto kamarad adigoo ka qaadaya kaararka iyo kaadhka xusuusta ugu yaraan 10 daqiiqo. Bedel labada shay oo kadibna isku day inaad dib u rogto kamaradda. Haddii guriyeynta muraayada ay isbedbedesho maaddaama muraayada ay u guurto u dhexeeyso naadiyada dhejiska, isku day inaad si tartiib ah u nadiifiso guriyeynta, ka saarto waxkasta burburka ama xagasha. Haddii dhammaan talaabooyinkani aanay xalin dhibaatada, waxaad u baahan tahay xarun lagu dayactiro kamaradda.
Batterkani ma isticmaali karo fariin qalad ah
Fariin qalad ah, waxaad ku gelisay batoon aan ku haboonayn kamarad Panasonic ama waxaad gelisay bateriga leh xiriirka wasakhda. Si tartiib ah u nadiifi xiriiryada birta leh maro qalalan. Intaa waxaa dheer, hubi in guriyeynta batterigu ay xor ka tahay qashinka. Mararka qaar waxaad arki kartaa fariin qalad ah haddii aad isticmaaleyso bater aan aheyn Panasonic. Haddii batteriga sadexaad uu shaqaynayo OK si aad u awooddo kamarad, waxaa laga yaabaa inaad iska indha tirto farriintan qaladka ah.
Sawirkaan waa fariin khalad ah
Waxaad arki doontaa farriinta qaladka kamarad Panasonic markii sawirkii aad dooratay laga ilaaliyay tirtirista. Isku day inaad ka shaqeyso xayeysiiska kamaradaha si aad u ogaatid sida looga saaro astaanta difaaca faylasha sawirada.
Maskaxda ku hay in noocyada kala duwan ee kamaradaha Lumix laga yaabo inay bixiyaan farriimo qaldan oo kala duwan halkan ayaa lagu muujiyey halkan. Haddii aad aragto farriimaha qalabka kamarad Panasonic ee aan halkan ku liis garayn, ka hubi tusaha isticmaale ee loogu talagalay qaabka Panasonic Lumix kamarad ah liisaska fariimaha kale ee khaladka ah, ama booqo qaybta Taageerada ee Website-ka Panasonic.
Nasiib wacan dhibka Panasonic-kaaga iyo dhibaatooyinka farriinta qalalaasaha sawirada!
Dhibaatooyinka Sawirka Olympus Mirrorless
Dhibaatooyinka Kale ee Kodak
Xalliyaan Fariimo qalad leh Sony Sony DSLR
Nikon DSLR Fariimaha Xalinta Sawirada
Fariimaha Samsung Camera Error
Pentax DSLR Fariimaha Xalinta Sawirada
Fariimaha Dhalashada Olympus ee Olympus
Sida loo abuuro ISO Image File ah DVD, BD, ama CD
Dami ka dib-ka-dib-u-furan-ka-furan ee iCloud Mail
Tababarka Aqoonyahanada Cali Jardin
Sidee Ayaan Isugeyn Lahaa Tweet Ka dib markii la daabacay?
8 Nalalka ugu fiican ee Laydhka ah ee Iibsiga ah ee lagu iibsado sannadka 2018
7 Talooyin loogu talagalay Isgaadhsiin Badan oo leh Macaamiisha Naqshadeynta Webka
Samsung UN55JS8500 4K Dib u eegida TV-ga UHD Qeybta 3aad
Qaadashada Sawirada Dijital ah ee Haysashada Gaarigaaga
Isbarbar Dhimista Internetka
Ereyada Qodobbada Guud ee Qoraalka ah iyo Web Jargon
Tilmaamyada Sims 2 Iskuday Mode
Nidaamka Waqtiga Shabakada Waqtiga
Dib u eegida iPhone 4S
Sida Loo Beddelo Khariidadaha Google Docs
Dib-u-eegga Wada-hadalka Sony SS-CS5
10ka Rakaabka ugu fiican ee 4K ee iibsada sannadka 2018
HP OfficeJet Pro 8600 Taxanaha All-in-One
Dib u eegid: Case Mummy Case for iPhone 4 / 4s iyo 5 / 5s
Maxay Yihiin Foomamka Daabacaadda Warbaahinta Dijital ah?